မဒမ်ကိုး: ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည်
သာယာကုန်းဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကြားရေးကျောင်းတွင် ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် နိုင်ငံအလိုက် လှုဒါန်းထားကြသော ကျောင်းဒကာ၊ ကျောင်းအမများစာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်အချိန်တွင် ကျောင်းဆောင်အား စတင်ဆောက်လုပ် -တော့မည့်အကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်တယ်..အလှုရှင်များနှင့် အလှုစာရင်းအားလုံးမှာ လက်ခံရရှိဆဲ ပမာဏများဖြစ်ပြီး ကျောင်းဒကာ၊ -ကျောင်းအမများအား လက်ခံပေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၀မ်းမြောက်စွာ ထပ်မံအသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ (Auto play အသံဖိုင်ပါဝင်သောကြောင့် အလုပ်ထဲမှ ဖတ်ရှုသူများ ဦးစွာအသံနည်းနည်းတိုးထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။)
အလှူရှင်တို့ရဲ့ စိတ်စေတနာ သဒ္ဓါတရားတို့အတွက် သာဓု သာဓု သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုသွားပါတယ်ကွယ်။
်ပန်းကလေးများ ပွင်.တော.မှာမို. ၀မ်းသာပီတီဖြစ်ရပါတယ်။
ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏။ ပန်းကလေးများပွင့်လန်းနိုင်ပါစေ။
အားရလိုက်တာ. ကလေးလေးတွေအသံကြားရတာ.။ သာဓု ပါဗျာ. ။
အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ ဒီ့ထက်မကလှူနိုင်တန်းနိုင်ကြပါစေ.။
မဒိုးကန်တို့ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို